SARS-CoV-2 Yakasiyana Nucleic Acid Detection Kit I- B.1.1.7 dzinza (UK), B.1.351 dzinza (ZA) uye P.1 dzinza (BR)
SARS-CoV-2 Variant Nucleic Acid Detection Kit II- B.1.1.7 dzinza (UK), B.1.351 dzinza (ZA), B.1.617 dzinza (IND) uye P.1 dzinza (BR).
SARS-CoV-2 Variant Nucleic Acid Detection Kit III-B.1.617 mitsetse (IND)
SARS-CoV-2 Antigen Bvunzo (Colloidal Goridhe) -nasopharyngeal (NP) swab, nasal (NS) swab, uye saliva specimens
Utachiona Kutakura Pakati Pakati Tube
SARS-CoV-2 / Flu / RSV Nucleic Acid Detection Kit (Multiplex PCR Fluorescent Ongorora Nzira)
RT Heroᵀᴹ II (Master Premix yekutanga-tambo cDNA synthesis yeReal Nguva PCR ine gDNase)
Mbizi Hove Yakananga PCR Kit
Nzira ina dzekudzivirira kusvibiswa kwePCR zvigadzirwa
ne admin pane 2021-07-30
Kuvaka SOP Systerm Simbisa PCR kuyedza SOP yekumisikidza hunhu hwevashandi vekuedza. Vanoedza vanonyatsotevedzera maitiro ekushandisa, uye kudzikisira kusvibiswa kwePCR kunogona kukonzerwa nezvinhu zvevanhu kana kudzivirira kuitika kwekusvibisa mukushanda. Mune addi ...
Nzira yekuvandudza mashandiro eLncRNA reverse transcript?
ne admin pane 2021-07-23
Tungamira Yakareba isina-kukodha RNA, lncRNA isiri-yekunyorera RNA ine kureba kwakapfuura mazana maviri ema nucleotides, kazhinji pakati pe200-100000 nt. lncRNA inodzora kutaura kwegene pane epigenetic, kunyora uye post-transcriptional mazinga, uye inotora chikamu muX chromosome kunyararidza, kudhirowa genome uye chroma ...
Inogona kupfuudzwa kubva kumunhu kuenda kumunhu mumasekondi gumi nemana. Chii chakaitika kune iyo "inotapukira zvakanyanya" kuoma kweDelta muZhong Nanshan Pass?
Tranaslated sosi: WuXi AppTec timu mupepeti MuGuangzhou, China, mapurisa anoona nezvekubatsira kuongororwa kwezvirwere akaburitsa vhidhiyo yekutarisa: Muresitorendi imwecheteyo, vaviri ava vakapinda muchimbuzi mumwe mushure meumwe vasina kusangana panyama. Masekonzi gumi nemana chete eco-e ...
SNP molecular labeling uye kuonekwa
Mushure mekunge nyanzvi yeAmerica Eric S. Lander akaronga zvakasarudzika imwechete nucleotide polymorphism (SNP) seyechitatu-chizvarwa mamorekuru mucherechedzo muna 1996, SNP yave ichishandiswa zvakanyanya muhupfumi hwehunhu musangano kuongororwa, kwehupenyu hwemajini ekubatanidza mepu yekuvaka, uye hutachiona hwevanhu hutachiona. , D ...
Sayenzi Yakakurumbira | Maitiro ekuona iyo nyowani coronavirus ne qPCR
COVID-19 chirwere chinotapukira chinokonzerwa neSevere Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Type 2. Kana munhu atapukirwa, zviratidzo zvinowanzoonekwa zvinosanganisira fivhiri, kukosora, nekufema. Iyo sampuli inoshandiswa kuyedzwa inogona kuunganidzwa ne nasopharyngeal swabs kana oropharyngeal swabs. Zvandiri ...
Iwe uchiri kushandisa tekinoroji yakagadzirwa makore 30 apfuura kutora RNA?
ne admin pane 2021-07-16
Uchiri kushandisa Trizol kutora RNA? Gosh, usandirega ndichinetseka nezve hutano hwako! Trizol yave kuda kuverengerwa, usandiudze iwe uchiri murima? Chinhu chikuru cheTrizol reagent iphenol, uye ma organic reagents akadai chloroform anowedzerwawo mukuyedza ...
Nezve RNA nzira dzekuburitsa Kare neazvino zvausingazive
ne admin pane 2021-07-09
Nhanganyaya: RNA, zita resainzi ribonucleic acid, chidimbu chayo chinobva kuRiboNucleic Acid, imhando yenucleic acid inoumbwa nekubatanidza anoverengeka eribonucleotides kuburikidza ne phosphodiester zvisungo. Chirevo chekutsvaga RNA ndechokubvisa isina kusvibiswa Yese RNA, uye yakakosha pri ...
Kuongorora kwakazara kwema molecular diagnostic tekinoroji (1)
ne admin pane 2021-07-08
Molecular diagnology tekinoroji inoshandisa mamorekuru biology nzira kuona kutaura uye chimiro chemavara emuviri wemunhu uye akasiyana maronda, kuti azadzise chinangwa chekufanotaura uye kuongorora zvirwere. Mumakore achangopfuura, pamwe nekusimudzira uye kuitisa mamorekuru ...
Nzira yekuburitsa yepamusoro RNA?
Kunyangwe iwe uri newbie kune iyo yekuzvarwa, kana hombe bhosi ane hunyanzvi hunyanzvi uye simba, wakambozvinetsa here kutora yepamusoro-soro sero yakazara RNA? Vangani vanhu vanorasa masampula akakosha nekuda kwekuoma uye kunetsa kushanda kwetsika nzira yeTrizol? Zvino, vhangeri ...
Yakakodzera kudzidza 丨 44 njodzi yekuongorora nzvimbo dzePCR rabhoritari
ne admin pane 2021-07-03
Kune maviri makuru mhando dzenjodzi mumaPCR marabhoritari: biosafety njodzi uye nucleic acid kusvibiswa njodzi. Iyo yekutanga inokuvadza vanhu uye nharaunda, uye yekupedzisira inobata mhedzisiro yePCR bvunzo. Chinyorwa ichi chiri chePCR rabhoritari yekuongorora njodzi uye nenjodzi dzinoenderana ...
Huwandu hwakazara hweSCI zvinyorwa zveForegene zvigadzirwa zviri 231, iyo yakazara mhedzisiro chinhu 786.202
Kubva payakavambwa mu2011, Foregene yanga ichitarisa mukuvandudzika kwemamorekuru uye maseru biology zvine chekuita netekinoroji, zvigadzirwa nemasevhisi. Kutaura nezve Foregene, iwe unofungei nezve: RNA yekuchenesa kit ine 11-miniti yekubvisa? Nongedzera PCR kit isina nucleic acid kucheneswa? ...
Mushure mekubaiwa jekiseni nemushonga weCCVID-19, ndoziva sei kuti masoja ekudzivirira chirwere akagadzirwa?
Kusvikira Chikumi 25, 2021, National Health Commission yeChina yakaburitsa data rinoratidza kuti vanhu vanopfuura mamirioni mazana matanhatu nemakumi matatu vakabayiwa jekiseni munyika yangu, zvinoreva kuti mwero wejekiseni revagari vese muChina wapfuura makumi mana muzana, rinova danho rakakosha kunosimbisa mombe im ...